Mitohy ny trafika any Androka Toliara: sokatra 300 natao kitoza, olona roa tratra | NewsMada
Mitohy ny trafika any Androka Toliara: sokatra 300 natao kitoza, olona roa tratra
Na eo aza ireo efa tratra, tsy misy fitsaharany fa vao mainka mirongatra ny fangalarana sy famonoana sokatra any Toliara. Na izany aza, tsy mikely soroka ny tompon’andraikitra any an-toerana.
Nahatratra olona roa indray tany amin’ny kaominina Androka, distrika Toliara II, faritra Atsimo Andrefana, ny tompon’andraikitry ny fitantanam-paritry ny Tontolo iainana sy ny ala (Dreef), niaraka tamin’ny mpitandro filaminana, ny herinandro lasa teo. Tratra tamin’izy ireo ny sokatra velona miisa 16, niaraka tamin’ny gony efatra nahitana kitozan-tsokatra, tombanana ho sokatra maherin’ny 300. Nalefa hohadihadiana any amin’ny tribonalin’Ampanihy ireo voampanga.
Tsy vao izao ny nisin’ny fangalarana sy ny famonoana sokatra any amin’ny disitrika Toliara II, indrindra ao amin’ity kaominina Androka ity. Efa notaterina teto ny nahatrarana sokatra miisa 352 tany amin’ny kaominina Belalandy, ny 11 mey teo. Nisy olona fito koa tratra niaraka tamin’ny kitozan-tsokatra ampolony kilao, ny faramparan’ny avrily teo. Manampy ireo ny sokatra maherin’ny 10.000, tratra ny 10 avrily.
Tetikasa fiarovana ny sokatra
Santionany ihany ireo, misy ny olona tratra, saingy tsy fantatra mihitsy ny tohiny, ny sazy ampiharina ary indrindra ho an’ireo atidoha maniraka ireo olona madinika. Ampahatsiahivina fa sokajina heloka bevava ny fidirana anaty faritra arovana, sy/na fakana ny harena voajanahary biby na zavamaniry tandindonin-doza ahina ho lany tamingana, toy ny sokatra.
Etsy ankilany, noraisin’ny talen’ny fanaovana fanadihadiana (police judiciare), ny Controleur general, Andrianirina Alain Bruno, ny alatsinainy 3 septambra teo ny solontena roa avy amin’ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny sokatra avy any Geneve Suisse, notarihin-dRtoa Susana Simoes Abbasi sy Rtoa Dalila El Mansour. Anton-dian’izy ireo, ny fampahafantarana ny tetikasa “Fiarovana amin’ny fampijaliana ny sokatra”. Eo koa ny fandraisana an-tanana ireo olona voasambotry ny mpitandro filaminana, ny fampahafantarana ny zony, sns. Antenaina fa hisy vokatra azo tsapain-tanana avy amin’ny tetikasa toy izao.